6 yeakanakisa mana-makumbo ekunyora shamwari | Zvazvino Zvinyorwa
6 yeakanakisa mana-makumbo ekunyora shamwari
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Mabhuku, Novela
Idzo shamwari dzepamwoyo, dzakatendeka uye dzakavimbika. Ivo vanga vanesu sezvo nyika iri nyika. Ivo vanotiperekedza mukushanya kwedu uye zvisirizvo, mukufamba kwedu, mitambo nemufaro, mune zvese. Zvisinganzwisisike kuti kune avo vasingavade kana kuvatya. Asi asina kumbova nembwa haazomboziva manzwiro avanokurudzira
Lord Byron akavasarudza ivo kuvanhu. Aitaura chokwadi. Ivo vanogona kukupa iwe zvese nekungotarisa kwauri. Kana kukubvunza iwe. Uye zvirokwazvo havafanirwe kutaura. Ivo havana mamiriro ezvinhu kuna tenzi wavo, mune zvakanaka uye mune zvakaipa, kune akanakisa uye akaipisisa. Muchokwadi uye mungano. Imbwa dzinonyorawo mapeji nemapeji ezviitiko zvisingaenzaniswi. Nekudaro, nerudo rusina mugumo rwandinozvitaurira kwavari, nhasi ndinonyora nezvevamwe vevaya imbwa dzevanyori. Ndangariro zvakare kune avo vakapfuura nemuhupenyu hwangu.
Zvakanaka regai tione. Ini ndichatanga nemadzitateguru ezvese mutts ari munyika, kureva mapere. Uye ini ndinopedzisira ndave neutera.
3 Jumble naTim
5 Bullseye (Zvakarurama)
Iyo alpha yechirume yeiyo Seeonee mombe, kubva Bhuku resangonaRudyard Kipling. Akela ndiye anoita sarudzo yekutambira Mowgli seimwezve yako. Zvakare ndiye mhumhi yakangwara uye yakashinga. Uye une urombo kwazvo nerufu rwake muhondo ye Jaros Imbwa.
Ini ndinotya kuti mamirioni evaverengi uye vateveri ve Game yezvigaro ndikande ganda ndiri mupenyu kana ndikazvirega. Saka, hongu. Hazvigoneke kusadaidza zita iro White Wolf yeanozivikanwa Jon Snow. Akangwara uye nehunyanzvi, Ghost ine iyo inoshamisa kubata iyo inopinda mune inozivikanwa saga ye George RR Martin.
Jumble naTim imbwa dzehudiki hwangu, pamwe neiyo yataive nayo yenyama neropa. Kana iwe ukaverenga mabhuku pane iwo mabutiro, iwe watove zera rangu. Uye zvimwe. Asi hapana zera kana zvinyorwa zvitsva zvinoshanduka kuva Guillermo Brown oa Vashanu. Kwete shamwari dzake dzisina makumbo mana. Isinganeti uye inogara ichitsvaga ruzivo, Jumble naTim zvirokwazvo imbwa. iyo isu tese taida kuve nayo zvevana.
Tese takaenda kubva Vakadzingwa kamwechete uye isu tese takatenderera tichifukunura zvakavanzika nazvo Jorge nehama dzake. Asi isu zvakare taiziva kuti isu taive ne ziso rakatarisa kana kunyevera kuhukura yaJumble naTim. Vaitiisa pakuchengetedza kuti tirege kuwanikwa nehuipi hwedu, kana newakaipa aive pabasa uyo aitihwandira isu patainge tichigadzirisa chirahwe ichocho.
Iwe haugone kupotsa iyo asingakanganwike protagonist ye Kudanwa kwemusango, ivo Jack London. Imwe yeanonyanya kukosha mavara e canine munhoroondo yezvinyorwa. Yako ndeimwe yeiyo zviri nani mienzaniso yedzidziso dzese dziripo uye kuti London yaiziva kurondedzera nenzira yehunyanzvi. Chero ani asingade imbwa anofanirwa kusangana naBuck.
Zvekupedzisira, zvakataurwa, kushaya simba. Pamwe pakuve anonyanya kurwisa-gamba, anotambudzwa uye anorasikirwa. Uye iwayo ndiwo mavara andinofarira. Ini ndinoda zita rayo rekutanga muChirungu, zvakanyanya sonorous. Uye zviripo nemuridzi wayo mumusoro wemusoro wechinyorwa chino.
De Oliver, mimhanzi ya1968. Iyo ndeimwe yemhando zhinji dzemafirimu e Oliver tendeuka, iyo yakasarudzika ye dickens. Uye, pakati pevamwe, yakaridza huru Oliver Reed, uyo akaberekwa chaizvo kuti ave neanonyanya kuvhiringidza, kuvhiringidza uye akaipa mavara. Saka akashongedza iyo ane hutsinye uye ane utsinye Bill Sikes, chimwe chezvandinofarira zvebasa rese raDickens.
Sikes inogara ichiperekedzwa ne Bullseye, nzombe inotyisa chena ine chivara paziso rekurudyi. Bullseye ndiye muenzaniso wakakwana wekuti imbwa dzinogona kuve sevatenzi vadzo pakanyanya uye zvakanyanya. Uye anovenga saSikes, asi sembwa dzese, dzekuvimbika kwakazara kunyangwe achienderera mberi achibatwa zvisizvo na tenzi wake. Zvekuti pakupedzisira anozofa achiedza kununura hupenyu hwake. Uye kuverenga kana kutarisa chiitiko iwe unogara uchifunga kuti iye anokodzera kufa kwakanyanya ndiSikes, nekuti Ini ndinogara ndichida kununura Bullseye.
Zvisinei, Kune zvimwe zvakawanda, asi ndinoisiya pano. Iwe unowedzerawo izvo zvinoitika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » 6 yeakanakisa mana-makumbo ekunyora shamwari
Iwo madiki mafaro anokosheswa nevanyori chete
Maraibhurari edhijitari atinogona kubvunza mahara